Euphorbia | December 2019
Gladiolus weelasha: sii kordhaya iyo daryeelka
Ugu Weyn Ee Euphorbia
Euphorbia: faa'idooyinka iyo waxyeellada
Euphorbia waa warshad dilka ah oo soo koraysa ku dhowaad dhammaan qaaradaha. Waxaa jira in ka badan kun nooc oo dhirtaas ah. Magaca "warshad" ayaa la helaa sababtoo ah afkoda iyo caleemaha geedka waxaa lagu buuxiyey casiir cad oo qaro weyn leh, oo u eg caano. Qodobada waxtar leh ee caanaha laga helo euphorbia Honey from euphorbia waxay leedahay dhadhan gaar ah iyo ari aan caadi ahayn.
Soo dhawow noocyada caanka ah ee kaabajka digoy
Ipomoea: beeritaanka, daryeelka, beerashada
Waa maxay idaha ay jiran yihiin iyo sida loo daweeyo
Sinyuha: noocyada, sharaxaadda, sawir
Cawska guriga waa warshad caddayn ah oo aad u la mid ah qoryaha duurjoogta ah, inkastoo yar yar. Waa mid aad u caan ah beeralayda, waxaa si firfircoon loogu koray guryaha iyo xafiisyada. Dheriga, dhirta waxay u egtahay geed yar oo dabiici ah oo leh taajka caadiga ah ee pyramidal. Iyo cirbaddiisa waxay ku faaftaa phytoncides waxtar leh oo ur wanaagsan. Read More
Qaybaha hoose ee caanka ah Phalaenopsis Isku darka iyo daryeelka guriga ka dib dukaanka
Qurxinta aan qabin ee qaboobaha iyo xayawaanka daaqada - gerbera cas
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Euphorbia 2019